Nguva yekuverenga: 4 maminitsi(Last Updated On: 14/09/2020)
Rinonzi Ghent ari yedu 5 Best zuva nzendo kubva kweBrussels mazita nokuti inozivikanwa nokuva mumwe Belgium Ages pfuma uye kukosha kwayo nemagariro, zvinoti; mumhanzi, mitambo, firimu, uye zvinoonekwa. Chinhu nakisa pedyo kweBrussels, iri chete 60 makiromita kubva kweBrussels uye hunogona kungoparara asvika nechitima.
Chimwe chinhu chakanaka kuita Ages guta rino inofadza iri kuongorora nayo netsoka, kubata kwatakaita yayo incredible Ages akitekicha, uyewo kunzwa kwayo noutano chadenga.
rumbidzo The achikudza of Rachel Gwayana nokuda Van Eyck hama iri mukati Saint Bavo Cathedral. Shanyira Belfry rinonzi Ghent, ari Town Hall, uye pedyosa kusvika kuguta dzokutengeserana nhoroondo panguva Old Fish Market.
Kurumidza kuonana kare panguva Anne Frank House, kudzidza pamusoro uri panguva Rijksmuseum, Van Gogh uye Rembrandt House mamiziyamu, uye nakidzwa yakakurumbira Heineken Experience. vafambi zvarisingazivi anogona kurenda bhasikoro kuongorora mumigwagwa, varipo nenhoroondo, uye chikuru Pubs pamusoro Amsterdam. Panguva iyi, romantics inogona rakasiyana Amsterdam ruzivo apo kunakidzwa vakazorora chikepe tasva.
It chete Zvinotora 2.5 maawa kubva kweBrussels kuti ikoko. kamwe iwe tauka chitima, musoro guru Grand Duchy uye kutanga rwokuparidza wako ichitsvaka Kirchberg kota uye dzimba dzaro kunokosha zhinji dzakadai European Court of Justice, uye European Commission. Musashamisika panguva Notre Dame Cathedral, Risingakanganwiki kuti zvakakwana anosanganisa mukupera Gothic mavakirwo pamwe Renaissance zvishongo. Mberi achidzungaira chete fadza migwagwa. Regai kurasikirwa kunokwira nzwisa Palace of Grand Duke uye guta masvingo.
Unoda embed yedu Blog romukova “5 Easy Day trip From Milan By Train” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/best-day-trips-from-brussels/ ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)